ASUS ဖုန်းများအတွက် One Click Root APK (ကွန်ပျူ တာမလို)
ASUS ဖုန်းများအတွက် One Click Root APK (ကွန်ပျူ တာမလို) ASUS ဖုန်းများအတွက် One Click Root APK (ကွန်ပျူ တာမလို)
အမေးများလာဆုံး ASUS ဖုန်း မော်ဒယ်တော်တော်များများ နဲ့
One Click Root Tool Apk ပြသနာလေးပါ။
ကွန်ပျူ တာမလိုပါဘူးခင်ဗျား Apk လေးနဲ့ ဖုန်းမှာတင်
တစ်ချက်ကလစ်တာနဲ့ Root Access ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Posted by tinmyolin at 07:27
Samsung Galaxy Phone/Tablet တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ Root လုပ်နည်း (ကွန်ပျူ တာမလို)
Samsung Galaxy Phone/Tablet တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ Root လုပ်နည်း (ကွန်ပျူ တာမလို) Samsung Galaxy Phone/Tablet တွေကို
လွယ်လွယ်ကူကူ Root လုပ်နည်း (ကွန်ပျူ တာမလို)
FB မှ ညီအကိုတစ်ယောက်တောင်းဆိုလာတာနဲ့
ဒီပိုစ့်ကိုလေးကို တင်ဖြစ်သွားတာပါ၊ အရင်လည်း
Posted by tinmyolin at 07:21
Lenovo A2691 ဖုန်းဗားရှင်း 2.3.6 အားလုံးကို အလွယ် Root လုပ်ပြီး မြန်မာစာထည့်နည်း
Lenovo A2691 ဖုန်းဗားရှင်း 2.3.6 အားလုံးကို အလွယ် Root လုပ်ပြီး မြန်မာစာထည့်နည်း Lenovo A2691 ဖုန်းဗားရှင်း 2.3.6 အားလုံးကို အလွယ် Root လုပ်ပြီး မြန်မာစာထည့်နည်း
Lenonvo A2691 ဖုန်းတွေနဲ့ မြန်မာစာပြသနာလေးပါ
အရမ်းလွယ်ပါတယ် One Click Root Tool လေးနဲ့ Root လုပ်ပြီး
Posted by tinmyolin at 07:10
Root အမျိုးမျိုး Myanmar font အမျိုးမျိုး myanmar keyboard. အမျိုးမျိုး apk အရမ်းကောင်းတဲ့ apk လေးမြန်မျှလိုက်ပါတယ် root အမျိုးမျိုးMyanmar found အမျိုးမျိုး myanmar keyboard. အမျိုးမျိုးမြန်မာစာမမှန်လို့ ပြင်ချင်လား မြန်မာစာနဲ့ ပတ်သတ်တာတွေ root နဲ့ပတ်သတ်တာတွေ ဒီအထဲမှာ အကုန်ရှိပါတယ် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အရမ်း good တယ်ဗျာ
Posted by tinmyolin at 06:54
Huawei C8816D လေးမြန်မာစာ ရရှိပါပြီ။
Root လုပ်ဖို့ ဒါလေးကို ဒေါင်းပါ။
Bootloader Unlock အတွက်တော့ ဒါလေးကို ဒေါင်းပါ။
အရင်ဆုံး Bootloader Unlock Code တောင်းရပါမယ်။
Bootloader Unlock Code ကို ဒီကနေ တောင်းလိုက်ပါ။
ရလာတဲ့ Code ကို မှတ်ထားပါ။
Bootloader Unlock လုပ်ရန် ဒေါင်းထားတဲ့ exe file လေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
Device ကို Fastboot Mode သွင်းပြီးကြိုးထိုးလိုက်ပါ။
Fatstboot mode >>> Volume Down + Power Key
PC က Device ကိုသိပြီဆိုရင် Bootloader Unlock exe ကို ဖွင့်ထားတဲ့ file ထဲက
Bootloader Unlock ဆိုတာကို Click လိုက်ပါ။
Box တစ်ခုကျလာပါမယ် ... OK & Cancel နှစ်ခုထဲက OK ကိုရွေးလိုက်ပါ။
Code တောင်းတဲ့ Box လေးကျလာပါမယ်။
မှတ်ထားတဲ့ Code လေးကို ထည့်ပြိး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
Device မှာ Rebbot ကျပြီး Battery အားသွင်းတဲ့ ပုံလေးပြရင် ရပါပြီ။
Battery ကို ဖြုတ်ပြီး ပြန်တက်ပြီး power ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ။
Device ပြန်တက်လာရင် USBDebugging တို့ Unknow source တို့ on ပြီးကြိုးထိုးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် Root လုပ်ဖို့ဒေါင်းထားတဲ့ Rar file လေးဖြည်ပြီး အထဲထဲက ရလာတဲ့ Folder ထဲက
Root.cmd ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
သူ့ပါသူ အလုပ်လုပ်ပေးပါမယ် ... နောက်ဆုံး Enter ခေါက်ဖို့တောင်းလာရင်
Device ပြန်တက်လာရင် Root ရပါပြီ။Font အတွက်ကတော့ ကျနော်က Smart_Zawgyi_Pro နဲ့ ထည့်လိုက်ပါတယ်။
ကျနော်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်တဲ့ အရာတစ်ခုပာာ တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်
..........::::: အဆင်ပြေပါစေ :::::..........
Kaung Htoo San
Credit : http://24sevennn.blogspot.com/
Posted by tinmyolin at 04:20
Version4.4.4အထိRoot ဖောက်ပေးစရာမလိုဘဲ မြန်​မာစာ ရနိုင်​တဲ့ Zawgyione2008(ifont)
Version4.4.4.အထိRoot ဖောက်ပေးစရာမလိုဘဲ မြန်​မာစာ ရနိုင်​တဲ့ Zawgyione2008(ifont)
Android ဖုန်း Version 4.0.အထက်​နဲ 4.3 ​တွေမှာ Root ဖောက်ပေးစရာမလိုဘဲ မြန်​မာစာ ရနိုင်​တဲ့ apk ​လေးတစ်​ခုပါ။ မြန်​မာစာ​တွေ အကုန်​မမြင်​ရတာ​တွေ လက်​ကွက်​မှာ မြန်​စာ မ​ပေါ်တာ​တွေလည်း ​​ပေါ်​စေမှာဖြစ်​ပြီး ​ဆော့ဝဲကို Install လုပ်​ပြီးရင်​ Open ဆိုပြီး မ​ပေါ်ပါ။ ဖုန်းရဲ့ Setting ကို ကလပ်​ Display မှာ Font မှာ အခု​ဒေါင်းမဲ့ apk ရဲ့ Zawgyione2008(ifont) ဆိုပြီး​ပေါ်​နေပါမယ်​ နှိပ်​လိုက်​ရင်​ အဆင်​​ပြေပါပြီး။ပြီး​တော့ Font စလုံးစတိုင်​​လေးလည်း လှပါတယ်​..။
81 KBပဲရှိပါတယ် ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းဖုန်းကိုကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီးပါပြီသူဗားရှင်းက 4.4.4 ရှိပါတယ်အဆင်ပြေလို့ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်
Posted by tinmyolin at 04:00
Download Manager ဖေ့ဘွတ်မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဖုန်းနဲ့ဒေါင်းချင်ရင်
Download Manager ဖေ့ဘွတ်မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဖုန်းနဲ့ဒေါင်းချင်ရင် ဖေ့ဘွတ်မှာသူများတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဖုန်းနဲ့ဒေါင်းချင်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကိုပြန်လည်မျှဝေလိုက်တယ် လိုချင်ရင်ယူလိုက်နော် အားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျာအဆင်တဲ့လင့်မှာယူလိုက်နော်Download Advanced Download Manager Pro v2.3.9 APKmirrorDownload Advanced Download Manager Pro v2.3.9 APK
Posted by tinmyolin at 06:12
PC မှာ Viber ကိုမြန်မာစာရိုက်ပြီး အသုံးပြုချင်ရင်fontနှင့် (မြန်မာလို Ebook)
PC မှာ Viber ကိုမြန်မာစာရိုက်ပြီး အသုံးပြုချင်ရင်fontနှင့် (မြန်မာလို Ebook) Credit:YGNBlogger
Viber မှာ မြန်မာလိုရေးချင် ဖတ်ချင်သူများအတွက် ဝေမျှပေးထားပါတယ်။ PC ပေါ်မှာ ဖတ်ရအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် error ကင်းစွာနဲ့ ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ပိုပြီးသိချင်ရင်တော့ အောက်ပါ Font နဲ့ စာအုပ်ကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
Posted by tinmyolin at 02:50
Android ဖုန်းထဲမှာ ဓါတ်ပုံတွေ ကို နောက်ခံသီချင်းထည့်ပြီးSlide Show လုပ်မယ်
Android ဖုန်းထဲမှာ ဓါတ်ပုံတွေ ကိုနောက်ခံသီချင်းထည့်ပြီး Slide Show လုပ်မယ် သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ Android ဖုန်းမှာ မိမိစိတ်ကြိုက် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို
နောက်ခံ သီချင်းလေးနဲ့ မလုပ်ချင်ကြဘူးလား။မလုပ်တက်ဘူးဆိုရင်တောင် ဒီကောင်လေးက
Posted by tinmyolin at 02:35
SMART PHONE တွေအတွက် playstore လိုလိုချင်တာရေးစရာမလိုပဲ installနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ MOBOGENIE PC SUITE
SMART PHONE တွေအတွက် MOBOGENIE PC SUITE Smart ဖုန်း သုံးတဲ့ လူတိုင်းဆောင်ထားသင့်တဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ
ဒါအပြင် Phone Contacts တွေ SMS တွေကို ဒီထဲမှာ တခါတည်းကြည်လို့ရတယ်။
စိတ်ပါရင် sms ကိုလည်း pc ကနေတခါတည်းပို့လို့ရတယ်။ဖုန်းထဲက အရေးကြီးတဲ့
Contacts တွေ sms တွေကိုလည်း PC မှာ back up လုပ်ထားလို့ရတယ်။ဖုန်းထဲက app တွေကို
PC မှာပဲ တခါတည်း delete လုပ်လို့ရတယ်၊ install လုပ်လို့ရတယ် back up လုပ်ထားလို့ရတယ်
Game တွေ နဲ့ မိမိကြိုက်တဲ့ app တွေ ကို market ကနေဒေါင်းယူခွင့်ရှိတယ်။
Posted by tinmyolin at 02:14
Sparky Lock Screen v0.99.5 APK(13 MB)
Sparky Lock Screen v0.99.5 APK(13 MB) Android ဖုန်းပိုင်ရှင်တွေအတွက် အထူးလက်ဆောင်လေး ဖြစ်တဲ့
၅ရက်နေ့ထွက် Sparky Lock Screenအလန်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ
ဖုန်းပိုင်ရှင်များ ကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း မိမိဖုန်းလေ့ာချတဲ့အခါမှာ ဒီဇိုင်းအမျိမျိူးချိန်းပြီး
Posted by tinmyolin at 04:10
ငွေဖြည့်ကတ် အမြန်ထည့်ချင်သူတွေအတွက် EZCharge2Apk 9MB
ငွေဖြည်ကတ်ကို ကင်မရာနဲ့ချိန်လိုက်တာနဲ့ နံပတ်တွေကို Scan လုပ်ပြီး ဂဏန်းတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်
Dwonload>>>>>mirrorcreator (or)solidfiles (or)mediafire
Posted by tinmyolin at 04:01
Unlock Pattern မေ့သွားလို့ ဖုန်း Lock ဖွင့်လို့မရတော့ရင် Android ဖုန်းတွေမှာ လုံခြုံရေးအရ သင့်ရဲ့ ဖုန်းထဲက အချက်အလက်တွေကို တခြားလူ အလွယ်တကူ ဝင်ကြည့်နိုင်ဖို့ Lock Pattern နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် Pin Number နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပိတ်ထားလို့ ရတယ်ပေါ့ဗျာ …
အဲ ဒါပေမယ့် … ကိုယ်ပေးထားခဲ့တဲ့ Lock Pattern ဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုတာ ဒါမှမဟုတ် Pin Number ဘာပေးခဲ့လဲဆိုတာ ခေါင်းထဲမှာ မမှတ်မိတော့ရင်တော့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
Posted by tinmyolin at 03:37